Jarmalka oo ka doodaya Gariiga - BBC Somali
Jarmalka oo ka doodaya Gariiga
19 Agoosto 2015
Image caption Xildhibaanada Jarmalka ayaa ka walaacsan in Gariiga uu bixin waayo ammaahda.
Baarlamaanka Jarmalka ayaa ansixiyay barnaamijka cusub ee Gariiga lacag cusub lagu ammaahinayo.
In kabadan afar boqol oo xildhibaan ayaa taageeray dowladda halka boqol iyo saddex iyo toban ayka soo horjeesteen qorshaha ugu danbeeyay ee lagu badbaadinayo dhaqaalaha Gariiga.
Ra'iisalwasaaraha Jarmalka Angela Merkel, ayaa laga cabsi qabay inay la kulanto dad badan oo ka tirsan xisbigeeda oo ka soo horjeeda barnaamijka.
Qorshaha cusub ee Gariiga ayaa 94 bilyan oo dollar la ammaahinayaa Gariiga.
Dadka ka soo horjeeda qorshaha waxyaabaha ay ka walwalsan yihiin waxaa ka mid ah, awooda ay Gariiga ku bixin karaan lacagta ammaahda iyo cabsi laga qabo in Hayaddda Lacag Adduunka aysan ka qayb qaadan barnaamijkan cusub.
Wasiirka Maaliyada ee Jarmalka ayaa xaqiijiyay inaysan jirin hubaal in barnaamijka lagu guulaysan doono, laakiin uu sheegay in Gariiga uu muujiyay inuu rabo isbadal ayna tahay masuul daro hadii aan la siin waddanka fursad ay isbadal ku sameeyaan.